हामी कसरी 2019मा सजिलो ब्याकलिङ्कहरू सिर्जना गर्नेछौं?
खोजी इन्जिन अनुकूलन सट्टा सख्त र डरलाग्दो हुन सक्छ, विशेष गरी युवा विशेषज्ञहरूको लागि बिना निश्चित अनुभव. यस क्षेत्रमा धेरै अनुकूलन प्रविधिहरू, तथ्याङ्कहरू, उपकरणहरू, प्रोग्रामहरू र एल्गोरिदम अद्यावधिकहरू छन्. यसबाहेक, डिजिटल मार्केटिङ स्थिर बजार आंशिक छैन. यस क्षेत्र दैनिक मा अधिक र अधिक उपन्यासहरू प्रकट हुन्छन्, र यो पनि विशेषज्ञहरु को लागि सबै आने वाली जानकारी संग राख्न को लागि जटिल छ. यी सबै कठिनाइहरूको बावजूद, एसईओ को बारेमा सोच्ने एक सरल तरीका हो - wismec gen3recensione. यस प्रक्रियामा तीनको सहभागिता र बिच्छेदन घटक समावेश छन् जुन ट्राफिक बढ्नका लागि सेवा गर्दछ. यी तत्वहरू - सामग्री, इनबाउन्ड लिङ्कहरू, र सोशल मिडिया समावेश छन्. सही तरिकामा यी अनुकूलन प्रविधिहरू लागू गर्दै, तपाइँ सजिलैसँग 2019मा ब्याकलिङ्कहरू पाउनुहुनेछ. तपाईंले यी सबै अनुकूलन चरणहरूमा महत्वपूर्ण ध्यान दिन आवश्यक छ किनकि तिनीहरू कुनै पनि एसईओ अभियान सफल हुन आवश्यक छ. यदि तपाइँ कम से कम एक अनुकूलन चरण सम्झनु हुन्छ भने, तपाईं एकदम कम ट्राफिक प्रवाहको साथ 10 औं Google SERP पृष्ठको अन्त्य गर्नुहुनेछ.
हामी यी तीन मुख्य तत्वहरू छलफल गर्न अघि, त्यहाँ जटिल कुरामा कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा बुझ्न केहि चीजहरू छन्।.
एसईओ घटक अन्तरगत
यो सामग्री, ब्याकलिङ्क र सोशल मिडियाको लागि महत्त्वपूर्ण छ जस्तै जटिल रूपमा तिनीहरूले एक सफल अनुकूलन पहल सिर्जना गर्दछ. गुणस्तर र परिष्कृत वेबसाइट अप्टिमाइजेसन गर्न, तपाईं इन घटक मध्ये एक छोड्न सक्नुहुन्न किनकि विजेता अप्टिमाइजेसन प्रक्रिया को यी प्रत्येक क्षेत्रहरुमा सजिलै हुनु आवश्यक छ. यसबाहेक, यी मुख्य एसईओ घटक मध्ये प्रत्येकले अरूलाई बलियो बनाउँछ. यदि एक घटक, ई. g. , सामग्री सही तरिकामा कार्यान्वित गरिएको छ, अन्य दुई तत्त्वहरू (ब्याकलिङ्कहरू र सोशल मिडिया) धेरै सम्भावित हुनेछन् तपाईंको वेब स्रोतमा. सही तरिकामा खोजी इञ्जिन अप्टिमाइजेसन गर्नाले पछिल्ला र विचारशील कामको एक टन हो. तपाईं आफ्नो अप्टिमाइजेसन अभियानमा कुनै शर्टकटहरू गर्न सक्नुहुन्न किनभने यसले तपाइँको वेबसाइटमा हानिकारक प्रभाव पार्छ SEO र अन्य अनुकूलनको क्षेत्रमा तपाईंको प्रयासहरू ध्वस्त पार्दछ।. सौभाग्य देखि, तपाईं एसईओ मा विशेषज्ञहरु लाई संदर्भित गर्न सक्नुहुन्छ. दुवै फ्रीलांसरहरू र घर एसईओ विशेषज्ञहरूले तपाईंलाई आफ्नो व्यवसाय लक्ष्यहरू पूरा गर्न मद्दत गर्न सक्छन्.
त्यसोभए, हामी यी तीन एसईओ घटकहरु जुन 2019 मा सजिलै संग ब्याकलिङ्क प्राप्त गर्न को लागी अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।.
(1 9) 1. सामग्री
सामग्री कुनैपनि अप्टिमाइजेसन अभियानको पहिलो मुख्य तत्त्व हो किनभने सामग्री अझै राजा छ. यसले सीधा तपाईंको साइटमा प्रयोगकर्ता अनुभवलाई प्रभाव पार्छ र उद्योगमा आफ्नो व्यवसायिकता देखाउँछ. प्रत्येक वेबसाइटमा सामग्री छ कि खोज इन्जिन मात्र देख्न सक्छ, यो सामाग्री मेटा सामग्री भनिन्छ. यसैले तपाईंलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ कि तपाईंले केवल गुणस्तर र अनुसन्धान आधारित सामग्री सिर्जना नगर्नु हुन्छ तर तपाईंको मेटाडेटा जस्ता युआरएलहरू, शीर्षकहरू, वर्णनहरू, शीर्षकहरू, र रोबोटहरू अनुकूलन गर्न पनि आवश्यक छ।. txt.
यद्यपि तपाइँसँग राम्रो अनुकूलित र राम्ररी डिजाइन गरिएको वेबसाइट हुन सक्छ, तपाई खोज इन्जिन अनुकूलनसँग कार्यान्वित हुनुहुन्न. तपाईंको वेबसाइट एसईओ अप्टिमाइजेसनमा एक ब्लग उत्कृष्ट योगदान हुन सक्छ. म दृढ सल्लाह दिन्छु कि ब्लगमा उपेक्षा नगर्न किनकि गुणवत्ता गुणस्तरले प्रयोगकर्ताहरूलाई खोजबाट आकर्षित गर्दछ र तपाईंको साइट पृष्ठहरूमा गहिराईमा जान्छ।.
यदि तपाईं राम्रो ब्लगर हुन चाहनुहुन्छ र तपाईका पृष्ठहरूमा नयाँ ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँलाई पछिल्लो चरणहरू पछ्याउन आवश्यक छ:
निरन्तर केहि नयाँ बनाउनुहोस्
तपाईंले खोज इन्जिनहरू जुन तपाईंको वेब स्रोत सक्रिय छ र तपाईंको ब्लगको पृष्ठमा नयाँ लेखहरू प्रकाशित गर्न आवश्यक छ।. तपाईंको ब्लग अधिक बार अद्यावधिक गरिएको छ, तपाईले Google बाट प्राप्त हुने राम्रो प्रतिक्रिया. यही कारणले तपाइँलाई तपाइँको ब्लग ताजा राख्न आवश्यक छ.
प्रयोगकर्ताहरूसँग उपयोगी डेटा प्रदान गर्नुहोस्
तपाईंको ब्लग सफलता सीधा तपाईको सामग्री पाठकहरूको संख्यामा निर्भर गर्दछ।. यही कारणले तपाइँले तपाइँलाई तपाइँको ब्लगमा प्रकाशित सामग्रीको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ. प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो समय पढ्ने अनौठो, अप्रासंगिक र कम गुणस्तरको सामग्री खर्च गर्न चाहँदैनन्. तपाईंले तिनीहरूलाई अनौंठो र साम्राज्यको साथ संलग्न गर्न आवश्यक छ. पाठकहरू एक-अर्कासँग साझेदारी गर्न तपाईंको सामग्री धेरै राम्रो हुनुपर्छ.
(1 9) 2. ब्याकलिङ्कहरू
लिङ्क निर्माण रणनीतिहरूमा अतिथि ब्लगिङ, रिलीज वितरण वितरण, टिप्पणीहरू, र अन्य लिंक उत्पादन रणनीतिहरू.
लिंक इमारत तपाईंको ब्रान्ड अप्टिमाइजेसन र प्रमोशनको लागि महत्त्वपूर्ण छ जुन खोजी इन्जिनले तपाईंको साइट प्राधिकरण र प्रतिष्ठालाई कुन किसिमका वेबसाइटहरु तपाइँसँग लिङ्क गर्दै छन् भन्ने आधारमा पहिचान गर्दछ।. अधिक उच्च गुणस्तर वेब स्रोत तपाईसँग लिङ्क, उच्च मा तपाई खोज परिणाम पृष्ठमा रेट गर्नुहुनेछ. प्राधिकृत साइटहरूबाट गुणस्तर लिङ्क रस प्राप्त गर्न, तपाइँसँग राम्रो र सान्दर्भिक सामग्री र प्रयोगकर्ताहरू बीचको राम्रो प्रतिष्ठाको साथ राम्रो गुणस्तरको वेबसाइटको आवश्यकता पर्दछ।.
तपाईंको आचार्य भित्र प्राधिकृत वेब स्रोतहरू पत्ता लगाउन, तपाईलाई बजार अनुसन्धान सञ्चालन गर्न र ब्लगहरु र वेबसाइटहरू जुन सम्बन्धित रूपमा तपाईंको सम्बन्धसँग सम्बन्धित छन् र अतिथि पोस्टिंग गर्न आवश्यक छ।. त्यसपछि तपाइँ यी वेबसाइट मालिकहरूसँग सम्पर्क गर्न र तिनीहरूलाई लिङ्कका अवसरहरूको बारेमा सोध्न आवश्यक छ. यकीन छ कि तपाईं dofollow लिङ्कहरू निर्माण गर्न मात्र हो भने यस प्रकारका ब्याकलिङ्कहरू तपाईंको साइटमा बहुमूल्य लिंक रस ल्याउन सक्छ. कुनै पनि साइटहरू खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसनमा सफल हुन सक्दछ जबसम्म अन्य साइटहरू यसलाई लिङ्क गरिँदैन.
आइतबार हामी तपाईको साइटमा गुणस्तर ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्ने उत्तम तरिकाहरू छलफल गरौं:
) प्रक्रिया तपाइँ अतिथि ब्लगिंग मार्फत ब्याकलिङ्क कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, मैले पहिले नै यस लेखमा वर्णन गरेको छु. लिङ्कहरू निर्माणको लागि यो उत्तम विकल्प हो किनकि यसले प्राय: खोज स्पिनको स्प्यामको रूपमा सम्बन्ध गर्दछ. साथै, यो तपाईंको लक्षित दर्शकहरूसँग कुराकानी गर्न एक राम्रो अवसर हो र नयाँ सम्भावित ग्राहकहरूलाई तपाईंको ब्रान्डमा आकर्षित गर्न.
प्रेस विज्ञप्तिहरू सिर्जना गर्नाले तपाईंको ब्रान्ड जागरूकता सुधार गर्न र तपाईंको उपन्यासहरू र परिवर्तनहरूको बारेमा मानिसहरूलाई बताउन एकदम सरल तरिका हो।. तपाइँलाई आवश्यक सबै कुरा तपाईको कम्पनीमा भएको घटनामा राम्रो लेखिएको टुक्रा विकास गर्न र यसलाई प्रेस विज्ञप्ति वितरण कम्पनीमा पठाउनु हो।.
रचनात्मक सामग्री सिर्जना गर्नुहोस्
गुण लिङ्क रस प्राप्त गर्न एक जैविक तरिका बहुमूल्य सामग्री सिर्जना गर्ने छ जुन प्रयोगकर्ताहरू साझेदारी हुनेछ र जस्तै. सफलताको कुञ्जी नियमित आधारमा इन्फोग्राफिक्स द्वारा पछ्याईएको अनुसन्धान-आधारित बकाया सामग्री प्रकाशित गर्नु हो.
स्थानीय डाइरेक्टरीहरू वा संकुचित ध्यान केन्द्रित व्यावसायिक संस्थाहरूमा सूचीबद्ध हुनुहोस्
तपाईंको वेब स्रोतलाई व्यापारिक निर्देशिकामा थप्न उचित छ किनकि त्यहाँ अझै धेरै खोजी गर्ने मानिसहरू छन्। आवश्यक संस्थाहरू यी निर्देशिकाहरू मार्फत. कुनै सम्मानित स्रोतबाट लिङ्कहरूले तपाईंको साइटको स्तर सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ, त्यसैले तपाईंको मौका नबिर्सनुहोस्. वेबमा धेरै सेवाहरू छन् जसले वेबसाइट मालिकहरूलाई प्रमुख स्थानीय निर्देशिकाहरूबाट लिङ्कहरू निर्माण गर्ने अवसरहरू प्रदान गर्दछ.
आफ्नो प्रतियोगी ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्नुहोस्
तपाईले आफ्नो बजार आला प्रतिस्पर्धाबाट लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ जसले पहिले नै लिङ्क इमारतमा आफ्नो प्रयास राखेको छ।. सबैभन्दा पहिला, तपाईंलाई प्रतिस्पर्धी विश्लेषण सञ्चालन गर्न र आफ्नो TOP5 आला प्रतिद्वंद्वहरू पत्ता लगाउन आवश्यक छ. त्यसपछि तपाइँका प्रतियोगीहरू लिङ्कहरू पहिचान गर्दछन् र स्रोतहरू जुन यी लिङ्कहरूबाट आउँछ. दाईहरूसँग सम्बन्धित आफ्नो प्रतियोगीहरू फेला पार्नुहोस् र उनीहरूको व्यवसायको लिङ्कका अवसरहरूको बारेमा सोध्नुहोस्.
(1 9) 3. सोशल मिडिया
सोशल मिडियामा सक्रिय हुन तपाईँको SERP मा उच्चतम स्थितिको लागि टिकट हो. हाम्रो दिनमा सामाजिक सञ्जाल खोजी इन्जिन अनुकूलनको अभिन्न भाग हो. सोशल मिडिया च्यानलहरू मार्फत, तपाइँ आफ्ना ग्राहकहरूसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र उनीहरूको अनुकूल सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्नुहुनेछ. धेरै मनपर्ने मनपर्नेहरू र साझेदारीहरू प्राप्त गर्न पृष्ठको प्राधिकरणलाई राम्ररी लिन सक्नुहुन्छ, र यसैले यसको वर्गीकरणले यसको लागि थप सामाजिक ट्राफिक.
तपाईंको सामाजिक सञ्जाल मार्केटिङ अभियान सञ्चालन गर्दा, निम्न सुझावहरू ध्यान दिन्छन्:
यदि तपाईले तपाइँको ब्रान्डलाई लोकप्रिय सोशल मिडिया प्लेटफर्महरू मध्ये एकमा स्थापना गर्नुभयो भने गुगल +, फेसबुक वा ट्विटर, तपाईलाई दैनिक आधारमा यसको काम गर्न आवश्यक छ. हप्तामा एक चोटी पोष्ट प्रकाशित गर्न पर्याप्त छैन किनकि तपाइँका अनुयायीहरू छिटो छिटो र तपाइँलाई बेवास्ता गर्न सक्नेछन्. त्यसो भए, यदि तपाई सामाजिक क्षेत्रमा सफल हुन चाहानुहुन्छ भने तपाईलाई आफ्ना अनुयायीहरूलाई दैनिक विषयहरूसँग रोमाञ्चक विषय, सर्वेक्षणहरू र प्रतियोगिताहरूमा उपलब्ध गराउनु पर्छ।. तपाइँका श्रोताहरूलाई सम्पर्क गर्न र यो तपाइँको ब्रान्डलाई वफादार बनाउन सबै सम्भव तरिकाहरू प्रयोग गर्न आवश्यक छ.
सामाजिक उद्योग पत्ता लगाउनुहोस् जुन तपाईंको उद्योगसँग सम्बन्धित छ. निस्सन्देह, यो फेसबुक, इन्स्टाग्राम, र ट्विटरमा तपाईंको व्यवसाय खाता बनाउन आवश्यक छ, तर यी प्लेटफार्महरू तर तपाईं उपलब्ध सामाजिक साइटहरूको अंश हो।. यो अन्य सामाजिक साइटहरू हेर्न को लागी उचित छ जसले लक्षित ग्राहकहरूको निचो सेवा गर्दछ.
मैले यस लेखमा वर्णन गरेको तीन घटक (विषयवस्तु, लिङ्क निर्माण, र सोशल मिडिया पदोन्नति) 2019मा व्यापार पदोन्नतिको लागि आवश्यक छ।. एसईओ सफलता सम्भव छ, तर यी कोर तत्वहरू उपस्थित बिना र ठीकसँग संलग्न हुन्छन्. आजकल, यो खोजी इन्जिन को खेल र केहि स्लिटिक चाल संग आफ्नो रैंक उच्च गर्न गाह्रो छ. यसैले तपाईंलाई राम्रो अनुकूलन अभियान सिर्जना गर्न आफ्नो समय र प्रयासहरू लगानी गर्न आवश्यक छ. फलस्वरूप, तपाईंले लगानीमा उच्च रिटर्न पाउनुहुनेछ.
तपाईंको अनुकूलन अभियानको लागि गम्भीर दृष्टिकोण हुनु पर्छ र योजना बनाउनुहोस् जुन तपाईंको आलाका प्राधिकृत स्रोतबाट बाह्य लिङ्कहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ, गुणस्तर र अनुसन्धान-आधारित सामग्री अनुकूलन र उच्च आवाजद्वारा अनुकूलन गर्न आवश्यक छ। कीवर्ड्स, र अंततः एक संभावित सामाजिक उपस्थिति बनाइएजस्तै तपाईंको संभावित ग्राहकहरु को सबै भन्दा ठूलो राशि सामाजिक नेटवर्क को उपयोग गर्दछ हरेक दिन.
जबसम्म तपाईं सुनिश्चित गर्नुहुन्छ कि तपाईंको अनसाइट अनुकूलन (वेब ​​डिजाइन, इन्टरलिंकिंग, सामग्री मार्केटिंग, खोजशब्द अनुसन्धान, मेटाडेटा अनुकूलन) सजिलै संग रोलिंग गर्दैछ; तपाईं एक प्रभावशाली र लिङ्क निर्माण अभियान हो र सामाजिक मिडिया प्लेटफार्महरूमा आफ्नो ब्रान्डलाई बढावा दिन, तपाईं अनलाइन व्यापारमा सफल हुन जाँदै हुनुहुन्छ.